Nei Gisella Cardia? - Kuverengera kuhumambo
Iwo anonzi Marian maapparitions muTrevignano Romano muItaly kuenda kuGisella Cardia zvinyowani. Vakatanga muna 2016 zvichitevera kushanya kwake kuMedjugorje, Bosnia-Herzegovina, uye kutenga kwesitendi yeRudzi Redu, iyo yakazotanga kuchema ropa. Maapparitions atove nyaya yeiyo yekuItaly yenyika terevhizheni panguva iyo muoni akazvibata nerunyararo rwakanaka pamberi pevamwe kushoropodzwa kupisa kubva kunevatsoropodzi vari mu studio akananga kwaari nemabhuku maviri. A Ndihil obstat nguva pfupi yapfuura yakapihwa naAchbishop muPolish shanduro yechipiri yeizvi, Muna Cammino con Maria ("Ari munzira naMary") yakabudiswa na Edizioni Segno, iine nyaya yemahara uye iyo yakabatana meseji kusvika muna 2018. Pari kunze zvakadaro Ndihil obstat haina, kana yega, inoita in situ diocesan kubvumirwa kwemaapparitions, zvirokwazvo haina kukosha. Uye Bhishopi wemunharaunda weCivita Castellana anoita sekunge akatsigira Gisella Carda chinyararire, achipa mukana kune imwe imba kune vashanyi vane hushamwari vakatanga kuungana mumba maCardia kuti vanamate, kana nhau dzeapparitions dzatanga kupararira.
Pane zvikonzero zvakati zvinoverengeka zvekutarisa Trevignano Romano seyakakosha uye yakasimba sosi yemuporofita. Chekutanga, zvirimo zvemashoko aGisella anotendeuka zvakanyanya ne "chiporofita kubvumirana" chakamiririrwa nemamwe magamba epamberi, pasina chiratidzo chekuziva kwake kuvapo (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski , diaries of Bruno Cornacchiola...).
Yetatu, iwo mameseji agara achiperekedzwa nezvinhu zvinoonekwa, humbowo hwemifananidzo hunowanikwa mukati Muna Cammino con Maria, isingagone kuve muchero wekufungidzira kwekufungidzira, kunyanya kuvepo kwechistigmata pamuviri waGiselle uye kutaridzika kwematanda kana zvinyorwa zvechitendero mune ropa pamaoko aGisella. Ona mifananidzo inotorwa kubva kwaari webhusaiti webhusaiti https://www.lareginadelrosario.com/, izvo zvinoti Siate tesoni ("ivai zvapupu"), Abbiate fede ("ivai nekutenda"), Maria santissima ("Mariya anoyera kwazvo"), Popolo mio ("Vanhu vangu), naAmore (" Rudo ").
Ehe, izvi zvingave zvinofungidzira kuti hunyengeri kana kupindira kwemadhimoni, sekudaro kuchema kwemufananidzo weMhandara uye mifananidzo yaJesu mune yaGisella nemurume wake, imba yaGianni. Pfungwa yekuti ngirozi dzakawa dzinogona kunge dziri pakutanga kwemavhidhiyo zvakadaro zvinoratidzika sezvisingabviri, zvakapihwa zvadzo zvechitendero uye kurudziro kuhutsvene. Ipa ruzivo rwedu kuburikidza neufakazi hweavo vanodzidzisa nezvekunze kuti ngirozi dzakawa dzinonyangadza sei nekutya Maria kusvika pakuramba kumutumidza zita, iwo mikana yekuti munhu angangoerekana agadzira kuburitsa mazwi anoti "Maria unoyera""Maria santissima") muropa pane seer muviri wemunhu
Kunyangwe zvakadaro, stigmata yaGisella, iye "hemographic" mifananidzo yeropa, kana zvimisikidzwa zvekubuda ropa hazvifanirwe, ivo pachavo, kutorwa senge chiratidzo chehutsvene hwekuona sekumupa iye. carte blanche maererano nezvose zvichaitika mune ramangwana.
Asi pane humwe vhidhiyo humbowo hwezvinhu zvezuva pamberi pezvapupu zvakawanda panguva yemunamato panzvimbo yemashura, yakafanana neyakaitika ye "Kutamba Zuva" muFatima muna 1917 kana zvakapupurirwa naPope Pius XII muVictoria Gardens of the Dogma of the Assept muna 1950. Izvi zviitiko, kana zuva rikaita kutenderera, kupenya kana kushandurwa kuva Mutungamiriri weChisimba, zvakajeka hazvigone kutorerwa nzira dzevanhu, uye kunyorwa (kunyangwe zvisina kukwana) pakamera. chete muchero wekubatanidzwa pamwe chete. Click pano kuti uone vhidhiyo yechishamiso chezuva (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del pekee / "Trevignano Romano - Nyamavhuvhu 17, 2019 - Chishamiso chezuva.") Click pano kuona Gisella, murume wake, Gianni, uye mupristi, vachipupurira chishamiso chezuva muzuva reruzhinji rweimwe yemagariro aGisella eMhandara Maria. (Trevignano Romano miracolo del chete 3 gennaio 2020 / "Chishamiso chaTrevignano Romano wezuva, Ndira 3, 2020")
Mharidzo kubva kuna Gisella Carda
Gisella - Varwi veChiedza be Ready
Zvinhu zvese zvava kuda kuparara.
Gisella - Nguva Yangu Yave Pedyo
Pinda muareka yesungano. Ndizvo chete zvauchakwanisa kukunda Dutu...
Gisella - Kwete Mese Makagadzirira
Fungisisai uye murinde nokuti nguva yasvika.
Gisella - Kuvhara Sei Nguva Yekumbundira
Gisella - Hauna Kugadzirira!
Munoona zviratidzo, asi hamudi kuona.
Gisella - Marwadzo Angu Ari Kukura Nesimba
... kutsamwa kwaMwari hakuchagoni kumiswa.
Gisella - Ave Kuda Kuwira Vanhu
Muchinjikwa mukuru uchaonekwa nenyika yese.
Gisella - Ino inguva yaAntikristu
...uyo achakurumidza kuoneka.
Gisella - Runyararo Rwaunoda
Munyengetero usina rudo mashoko asina maturo.
Gisella - Yambiro Yave Kuitika
Enda zvino kune kureurura kwevhiki.
Gisella - Uchatambudzwa seMwanakomana Wangu
Marwadzo ako achapiwa mubayiro wakapetwa kane chiuru.
Gisella – Namatira Chechi
Tevera Magisterium yechokwadi yekutenda.
Gisella – Teerera Vaprofita Vechokwadi
Hakuna mapofu anodarika anoramba kuona.
Gisella - Mwaka Wakaoma Uno
Gadzirira kuburuka kweMweya Mutsvene.
Gisella - Zvese zviri Kuwedzeredzwa
Batana, namata ... mafungu emvura anokonzera njodzi huru.
Gisella - Kunatswa kunokosha
Miedzo inouya ichave isingasviki pasainzi nemushonga.
Gisella - Hauna Kunzwisisa Here?
... hapachina nguva.
Gisella - Munguva pfupi, iyo Kupunzika
Iwe wakasarudzwa sevarwi vechiedza.
Gisella - Fomu Nharaunda Diki
Ivai vaapositori vaJesu neMoyo wangu.
Gisella - Ini Handigone Kubata Ruoko rwaBaba Vangu!
Wakuvadza zvakadii iwe, zvakadii zvakaipa zvawakamutsa.
Gisella - Mukoma Kurwisa Mukoma
Gisella - Chechi iAdrift
Kutsauka pakutenda kwaita kuti ufuratire.
Gisella - Nguva Yakwana
Marwadzo acho achave makuru, makuru kupfuura iwe unogona kufungidzira.
Gisella - Chechi Iri Kuraidza Kufira Kwavo
Iva mwenje unopenya murima rino razvino.
Gisella - Ndinochema
Usatambise nguva yako pazvinhu zvepanyika.
Gisella - Machechi Achaparadzwa
Kunamata chete uye kuvimba ndiko kunogona kukuponesa.
Gisella - Iva Akasimba, Namatira kuna Jesu
... nekuti nguva yakwana kwaAntikristu.
Gisella - Idzi Ndidzo Nguva Dzinofanotaurwa
Izvo zviri kuuya hazvichakwanise kudzikiswa.
Gisella - Hapasisina Nguva
Nyika sekuziva kwako yave kuda kuchinja.
Gisella - Vavengi vanobva kuGungwa
Zvino, kwete mangwana, ndiyo nguva yekutendeuka.
Gisella - Communism iri Kubata
Tasvika pahondo yekupedzisira.
Gisella - Simuka, Vhangeri!
Jesu ari kuuya!
Gisella - Yambiro yave pedyo
Munguva pfupi, kuchave nehondo - uye iyo nguva yaAntikristu.
Gisella - Zvese zviri Kuzadzikiswa Zvakakwana
Ramba, ipapoka, misungo yaSatani, misungo, nyongano
Gisella - Isa Moyo Wako Mumunamato
... zvikasadaro haugone kumira zviri kuuya.
Gisella - Vazhinji Vawira Mukunyengera Kukuru
Gara padyo nevapristi vatsvene.
Gisella - Usashamisike…
... kutenda kwako kuri kuedzwa.
Gisella - Murume Achaenda Mad
Chinja - hauna nguva yakawanda.
Gisella - Kudzikisira Kwenhema
Munguva pfupi, nyonganyonga ...
Gisella - Gadzirira mune Kukomba
Jerusarema Idzva rave pedyo.
Gisella - Rima reKunyengera
Chechi iri mukuvhiringidzika kwakazara.
Gisella - Kubatana kwePentekosti Itsva
Chamupupuri chinorova moyo yese.
Gisella - Mufundisi Freemasonry Anoda Chechi Imwe
Namatira America, iyo icharangwa ...
Gisella - Iva Nemwoyo Yakazarukira Mwari
Epidemics inopararira pamusoro pevanhu ...
Gisella - Nzara Iri Kuuya
Providence inosvika ichibva kumativi ese.
Gisella - Ndiri Kukudhirowa Pamwe Chete
... kuitira kurwa yekupedzisira hondo.
Gisella - Kutambudzwa kuri kuenderera mberi
Namata kuti machechi aisazovharwa.
Gisella - Iva Nemwoyo Wakachena
... semuApostora Johane.
Gisella - Yambiro pamusoro peGnosticism
Vashoma vakatenda mumushonga wechokwadi chete, unova Mwari nekutenda.
Gisella - Vanotenda Mukuramba
Pakusarudza nyaradzo pachokwadi.
Gisella - Iyo Yakanyanya Kuchenesa
Usamirira ... tendeuka nguva isati yapera.
Gisella - Iyo Nguva Inosvika Mhedziso Yayo
Chinja nekukurumidza sezvazvinogona.
Gisella - Munguva pfupi, Anopesana naKristu
Nguva yava pedyo ...
Kubva kuEastern Europe kutambura kwako kuchauya.
Gisella - Mwanakomana Wangu Ainzi Mad
Chokwadi chinofanira kusheedzerwa.
Gisella - Nei Usingavimbi?
Jesu anoziva kuzvipa kudya kwake.
Gisella - Nyengeterera Yandakatsaurwa
... namatira kuti vatendeutse moyo yavo.
Gisella - Munguva pfupi, Dutu
Hapana chakadai chakauya kare.
Gisella - Chitendero Chitsva Chichaiswa
Munguva pfupi iri kutevera chiKristu hachichazozivikanwi.
Gisella - Enda undoparidza!
Ivai vapostori vechokwadi.
Gisella - Unotorerwa Zvese
Asi iwe uchava nemufaro muna Mwari oga.
Gisella - Isita Yakakosha
Zviratidzo zvichauya zvichaonekwa kune vakawanda.
Gisella - Ipa zvese kwandiri
Usarega zvakaipa zvichivhiringidza pfungwa dzako.
Gisella - Hwamanda Dzarira
Imwe chete yasara: Ruramisiro
Gisella - Dutu Iri Pauri
Nguva dzakafanotaurwa dzasvika.
Gisella - Iva Nehanya Nezve Mishonga
Hazvina basa kana iwe uchisekwa.
Gisella - Nguva yengoni yakavharwa
Solar flares inokanganisa tekinoroji.
Gisella - Munguva pfupi, Kururamisira kwaMwari…
Pane nguva shoma yasara.
Gisella - Udzvanyiriri Hwakavapo
Zvakaipa zvakamira kuvanda.
Gisella - Nhema dzakaipisisa kupfuura Denda
Munguva pfupi, Anopesana naKristu achaonekwa.
Gisella - Nguva Itsva, Nyika Idzva
Usatya chero chinhu.
Gisella - Rima rave Kuda Kuburuka
Chinja izvozvi. Anopesana naKristu ave kuda kuonekwa.
Gisella - Varwi Vangu veChiedza
Tiri kukugadzirirai yambiro.
Gisella - Zvinoshamisa Zviitiko uye Grandiose Zviratidzo zviri Kuuya
Zvichava zvakaoma kusahadzika mavambo avo.
Gisella - Yambiro Ichafumura Zvese
Usave manyepo ... gara uchipupura.
Gisella - Chechi Ichararama Kushuva Kwake
Dutu rinotyisa richazunungusa nyika.
Gisella - Yakadai ndiyo Nguva
Ruoko rwaMwari haruchakwanise kudzorwa.
Gisella - Iyo Nguva Yakafungidzirwa kubva kuFatima Kuenda yasvika
Verenga Apocalypse uye mairi uchawana chokwadi chenguva dzino.
Gisella - Sarudza
Chiedza chava pedyo ...
Gisella - SeMurombo Mupemhi
... Ndakamirira rudo rwako.
Gisella - Zvino Uchaona Njodzi
Chechi ichatambura kusati kwazvarwa patsva.
Gisella - Jesu, Chikafu chako uye Kudziya
Vhenekesa murazvo wekutenda.
Gisella - Ino inguva yekutambudzwa
Namata, kuti uone mhumhi dzakapfeka matehwe emakwai.
Gisella - Mugwagwa waAntikristu unovhura
... asi moto weMweya Mutsvene urikuuya.
Gisella - Unganidza seMweya mizhinji sezvazvinogona
Udza hama dzako nehanzvadzi kuti vaite chete kuda Kwangu.
Gisella - Vatican Ichazununguswa Zvikuru
Ndiri kuvimba neminamato yako kudzikamisa zvichauya.
Gisella - Zvirwere Zvichanyanya
Iwe une mushonga mumwe chete: munamato uye kuvimba
Gisella - Zvino Yambiro yave pedyo
Ndichadzoka nesimba rangu, nerudo rwangu uye nehukuru hwangu.
... kuti boka diki rirambe rakasimba.
Gisella - Muchadanana
Nzara ichakurumidza kusvika.
Gisella - Yambiro kune Vafudzi
Unganidza boka, dzidzisa kutsvenesa.
Gisella - Shandura: Nguva Yapera
.... kuchave nekuteedzana kwezviitiko
Gisella - Mweya Mutsvene Uchazovhuvhuta Zvakasimba
Ini ndinotarisira kudzoka kweMwanakomana wangu.
Gisella - Munguva pfupi, Chitendero Chepasi Chete
Usatya chinhu kana iwe uina Kristu.
Gisella - Kuchema Kwemarwadzo Ekuzvara
Mwanakomana wangu achazvarwa pakati pekutambudzika.
Gisella - Iva SaNoa
Wese munhu aimuona semupengo, zvakadaro aive naRutendo.
Gisella - Mhepo dzehondo
Usave nehanya neinoita senge runyararo.
Gisella - Ino inguva yeHondo
Kutsanya uye Rosary.
Gisella - Nei Usiri Kuteerera Amai?
Zviratidzo zvasvika uye hauchatendi.
Gisella - Manyepo Anovanza
Vachaedza kutaura kuti zviri kuitirwa zvakanaka zvako.
Gisella - Kudengenyeka kwenyika muVatican
Gisella Cardia - Pfupi Ndichapindira
Kutinhira kukuru kwave kuda kusvika.
Gisella - Zvese zvave Kuda Kuitika
Unofanira kusimba mukutenda kuti upone.
Gisella - Vhura Mwoyo Yako
Zvikasadaro hausi kuzoona suwo reKudenga rave kuda kuvhurwa.
Gisella - Dhiabhorosi Anoburitswa
Iva wakagadzirira chero nguva yeChiedza.
Gisella - Iyo Chete Nzira
Usatya rudo rwaMwari.
Gisella - Chii Chawaitarisira?
... mushure mezvivi zvese zvakaitwa?
Gisella - Namatira China
Kubva ipapo, zvirwere zvitsva zvichauya.
Gisella - Nguva Yakwana!
Munguva pfupi iwe uchaona iyo nyika ichichinja.
Gisella Cardia - Kururamisira kwaMwari Kwave Kuda Kurwisa
Ndinokubvunza zvakare zvakare nemisodzi: namata, namata, namata zvakanyanya
Gisella Cardia - Hondo Pakati Pezvakanaka Nezvakaipa Iri Kuenderera Mberi
Namata, namatira, namatira Chechi
Gisella Cardia - Chechi Ichamuka Kubva kune Vakafa uye Vachakura
Mufaro uchatonga pasi pano.
Gisella Cardia - Iye zvino Nguva Ipfupi Chaizvo
Vazhinji havazivi kuti zvese zviri kudonha sei.
Gisella Cardia - Zvese zvichawa
Ndapota, vana, hapachina nguva, tendeuka.
Gisella Cardia - Yambiro Ichakurumidza Kusvika
Zvigadzirire iwe pachako chiitiko chakakosha ichi
Gisella Cardia - Humambo hwaMwari hwave padyo padyo
Munguva pfupi ino nguva yekutya, yekusarongeka uye yekuzvikudza haichazovipo.
Gisella Cardia - Zvese zvinhu zviri Kunanga Kuzviparadza
Vazhinji vakatengesa mweya yavo kuna satani.
Gisella Cardia - Usave Kure naMwari
Zvese zvinhu zvino zvinoenderana nesarudzo yako.
Gisella Cardia - Hana Dzakawanda Dzichazununguswa
Usamirire kusvikira panguva iyoyo - gadzirira iwe ...
Gisella Cardia - Vachabvisa Chibayiro cheEucharistic kubva kuMisa
Kana Makereke epanyika akabatana nemasimba epasi, ipapo pachave nekutambudzwa kwechokwadi ...
Gisella Cardia - Akasarudzirwa Iyi Nguva
Munguva pfupi, bope guru muChechi ...
Gisella Cardia - Hondo iri Pedyo
Asi usatya, ini ndiri pano kuti ndikudzivirire.
Gisella Cardia - Hausati Wagadzirira Izvozvi
Usatambisa imwe imwe nguva.
Gisella Cardia - Pasina nguva Vana Vangu Vakatendeka vachazadzwa neMweya Mutsvene
Zvino matenga nepasi zvakabatana
Gisella Cardia - Chii Chichauya Chichava Chakaipisisa
Ndanga ndichikugadzirirai zvakanyanya kwenguva dzino.
Gisella Cardia - Nguva Dzakaipisisa Kuvanhu
Gisella Cardia - Vanoda Kukuparadzanisa
Jesu achakurumidza kukusunungura kubva kuudzvinyiriri uhwu.
Gisella Cardia - Muchinjikwa Uchakurumidza Kuvhenekera Denga
Muchinjiko anozovhenekera denga ...
Gisella Cardia - Usakanganwa Kutongwa Kwake
Munamato wepasirese unosanganisira zvimwe zvitendero haugoneke, nekuti nenzira iyi Chikristu - icho chechokwadi - chingabviswe.
Gisella Cardia - Tarisa Maitiro Avari Kundirapa
Kubvira pakuvhuvhutera, mamwe hutachiona huchaonekwa.
Gisella Cardia - Nhasi Chechi Iri Kurarama Kushuva Kwayo
Vashoma vangu vakasara vachatambudzwa
Gisella Cardia - Zvino zvave Kurumidza
Iwe haunzwisisi here kuti nguva idzi dzave kugumisa?
Gisella Cardia - Jesu Ari Kuuya
Iwe uchaona chinoshamisa chehupenyu hutsva.
Gisella Cardia - Mhepo dzehondo
Shevedzera zita raJesu!
Gisella Cardia - Usave Usingaite
Ndichagara ndiri parutivi rwako.
Gisella Cardia - Kutanga kweApocalypse!
Anopesana naKristu anozozvizivisa amene munguva pfupi.
Gisella Cardia - Namatira America
Zvese zvinongoerekana zvawa.
Gisella Cardia - Munguva pfupi, Kwakakurumidza
Chiratidzo chiri kuuya ...
Gisella Cardia - Hapana Chichava Chakafanana
Yambiro iri kuswededza zvakanyanya.
Gisella Cardia - Iyo Revolution yagadzirira
Gadzirirai dzimba dzenyu semachechi madiki.
Gisella Cardia - Order Ichadzoka
Kushivirira kwechinguva chidiki.
Gisella Cardia - Kunyarara Kwakakwana Kunze Kwekutya
Usatende nhema dzaSatani nekunyepedzera.
Gisella Cardia - Jesu Haazombokusiya
Iwe iwe wataura wako apachokwadi uye anetsananguro "Hongu" hauchashayiwa chinhu.
Gisella Cardia - Haunzwisise!
Vazhinji havakoshese kuvepo kwangu.
Gisella Cardia - Tarira, Hondo Yakatotanga
Teerera kune kudzvinyirira uye izvo zvavachazoda.
Gisella Cardia - Chenjera!
Satani anoda kutonga hupenyu hwako nepfungwa.
Gisella Cardia - Satani Anotenda Kuti Akatokunda
Ishe vanokupa rudo mumoyo mako kuti iwe, vana vangu, usarasika.
Gisella Cardia - Matenga Matsva nepasi Idzva
Nokukurumidza matenga anozovhurika uye Mwanakomana waMwari, Ishe wangu, anouya ogadzira matenga matsva nepasi idzva.
Gisella Cardia - Mabhora eMoto Achaburuka
Nenguva isipi Nyevero ichave iri pauri, ichikupa sarudzo yekuda Ini kana satani.
Gisella Cardia - Hazvigone Kukanzurwa
Zvese zvinouya zvichaderedzwa neminamato yako, asi hazvigoni kudzimwa.
← Nei Martin Gavenda?
Nei Jennifer? →